PCB Warshadaha - Golden Saddex Xagalka PCB & Technologies Co., Ltd
Qulquli Chart of Management Quality
PCB Khubarada bixiyaan PCBs jaban oo tiro yar sida 1 gabal in ay u sarraysaa sida 5,000 gogo '. Intaa waxaa dheer, samaynta PCB u fiiriyaan in ka badan design kasta qaladaad iman kara. Adeeggan ma laga heli karaa ugu badnaan guryaha been PCB. Sidoo kale, waxaannu raaci manufacturingworkflow aad u adag PCB si loo hubiyo in bixinta tayo sare leh. macaamiisha PCB Golden Saddex Xagalka kala duwan badan oo warshadaha iyo qaybaha ganacsiga, sida Semiconductor, Kombuyuutarada ganacsiga, isku xirka iyo isgaarsiinta, suuqyada wireless, caafimaad iyo noolaha, warshadaha iyo nidaamyada gundhig, kaydinta network, korantada baabuurta, alaabta lagu ciyaaro digital, alaabtii shaybaarka iman, iwm, taasina waa sababta aad ku kalsoonaan kartaa adeegyada PCBAmanufacturing iyo shirkii PCB our. Sida, taasina, aan meel PART kiisaska macaamiisha si aad tixraac. Waxaan samayn karaa ka badan oo aad ka fekeri. Guud ahaan, macaamiisheena caalamka leeyihiin dareenkaa u socda adeegyada our: jawaab degdeg ah, heerka qiimaha macquulka ah, top aragtida macaamiisha, go'antahay tayo leh.
Golden Saddex Xagalka PCB maalgelisay in ka badan 10 million USD waayo, goobaha warshad, oo ay ku jiraan PCB iyo PCBA qalab shirkii (Acid Copper Iyada-dalool dahaadhay, CNC Drilling, PCB Iagu Machine, PCB axdi qarameedka Machine, dhulku Mount Machine, Reflow foornada, Automated indhaha Inspection (AOI) , Wave kabida) iyo hab cilmiyaysan oo ah maamulka, kaas oo aad shuruudaha PCB iyo shirkii PCB la oofin karo oo tayo sare leh oo waafaqsan heerarka caalamiga ah.
Awooda PCB Warshadaha
size daloolin yar ee 0.1mm (~ 4mil)
1 ilaa 36 layers
Adag (Heerka FR4), hayalka san, Aluminum taageeray.
FR4 *, Rogers, Duriod, Polyimide, CEM1,3, iwm
laga bilaabo dhumucdiisuna waxay abuurtay PCB at 8mil waayo adag iyo 0.2mm for hayalka san.
0.4 ounce ilaa 4 ounce copper
Trace Ugu Yar / Space of 3mil.
Dhamaado waxaa ka mid ah; Gold bilowga ah, Silver, Tin, HASL free Lead iyo OSP.
midabada dhameysatay Guddiga; Green, Blue, Black, Yellow, Red, White.
Waxaan dooran copperplate fasalka + A si loo hubiyo in qaab xasilloon (FR-4 ee guud) ee been PCB. Inta lagu guda jiro habka wax soo saarka ee PCBA, khadadka dahaadhay naxaas ah si toos ah iyo mashiinada qodista-xawaaraha sare (brand: TMAX) si sax ah iyo bixinta si degdeg ah loo ballan qaaday. All guddiga circuit ku daabacan waxaa lagu ogaan doonaa by mashiinada automatic sare baaritaan duulaya (ama jir imtixaanka) marxaladaha xiga si loo hubiyo in PCB walba waa OK ka wareeggeedii hoose in ay qaab ka baxsan. Iyadoo wareega hore ee design PCB, waqtiga had iyo jeer waa mid aad u muhiim ah. Our deg deg ah-jeedo waayo wadanay shirka PCB, bey'ada (amarada isbedel Engineering) iyo reballing BGA / su'alaha adeegyada keenaya wakhti aad hogaanka la xiriira ugu sareeya, ma si arrinta mugga (yar sida isku waslad). Our adeegga express 20 saacadood muunad PCB ayaa durba baado nolosha ee kooxaha weyn design wax soo saarka badan ee waqtiyada adag ah. Our injineer raaci doona aalada adag oo la safeeyey pcba in ay sameeyaan nidaamka of saarka PCB iyo shirkii PCB. looxyada Our PCBA si ballaaran u adeegi jireen macaamiisha ah ee kala duwan oo ka mid ah warshadaha, sida gaari, caafimaadka & caafimaadka, kaarka nidaamka, iyo macaamiisha qalabka korontada. Guud ahaan, waxaan buuxiya heerarka maaraynta tayada ISO iyo IPC-A-610E weji ka mid ah maaddooyinka soo socda, daabacaadda shaashadda, smt, aoi, ipqc, maquufin iyo imtixaanka PCBA oo dhan. Guud ahaan, aad noocooda PCB si fiican u adeegi karo noo by. Tan iyo markii aan helno xal wax soo saarka qoreen, geedi socodka xiga oo dhan waxaa kormeeraya oo koontaroolaya doonaa by our adag aalada maamulka PDCA. Our injineerada quduuska xiriiri doonaa waqtiga adiga iyo xalliyo dhibaato. Waxaa intaa dheer, awoodaha PCBA caalamka saarka our yarayn kartaa qarashka ka baxsan laga filayo oo aan kaaftoomi kasta. Annagu waxaannu noqon doonnaa aad soo saaraha PCB iyo shirkii PCB lammaane fiican.
(Waayo, sawiro dheeraad ah fadlan riix halkan)
Control Tayada Warshadaha PCB
Waxaan dooran-qeybiyeyaasha sheet top si loo hubiyo in qaab xasilloon (FR guud-4). Inta lagu guda jiro habka wax soo saarka ee, khadadka dahaadhay naxaas ah si toos ah iyo mashiinada qodista-xawaaraha sare (brand: TMAX) si sax ah iyo bixinta si degdeg ah loo ballan qaaday. All guddiga circuit ku daabacan waxaa lagu ogaan doonaa by mashiinada automatic sare baaritaan duulaya (ama jir imtixaanka) marxaladaha xiga si loo hubiyo in PCB walba waa OK ka wareeggeedii hoose in ay qaab ka baxsan.
Warshadaha kala duwan PCB
Waxaan maalgelisay in ka badan 10 million USD on qalab PCB oo ay ku jiraan khadadka electroplate, mashiinada qodista, baaritaan duulaya, baarida text iwm oo dhan waa kuwa waayo, waxaad bixiya awoodda ee 15,000 mitir murabac oo bil walba soo saarka PCB, taas oo lagu dabaqi karo amar ganacsiga yaryar-dhexdhexaad-weyn . In si ay u la kulmaan noocyo kala duwan oo dalabaadka suuqa, waxaan ka dhigi soo baxay xal warshadaha kala duwan ee soo socda noocyada PCB. Sidaas, waxaan qaadi kartaa ilaa leh baahida macaamiisha ballaariyo adeegyada our dabacsan.
Debecsan saarka wareeg daabacan HDI PCB saarka Aluminum saarka PCB
Adag saarka PCB hayalka san Carbon saarka PCB khad Blind aasay via saarka PCB
copper culus saarka PCB saarka PCB Impedance Guba in guddiga wax soo saarka PCB
Mil Creech saarka PCB saarka PCB Automotive Network saarka PCB isgaarsiinta
saarka PCB Backplane Lead saarka PCB free kharashka Low saarka PCB
4 Lakabka saarka PCB 6 Lakabka saarka PCB 8 Lakabka saarka PCB
Marka aad dhamaysato habka wax soo saarka PCB, hadda waxa la joogaa wakhtigii si ay u diyaariyaan waxyaabaha soo socda sida laga soo xigtay liiska BOM iyo bilowdo wajiga PCB ururkii ama dib u hubi design PCB ah. Sidoo kale wixii faahfaahin dheeraad ah, in badan oo aad u eegi karaan adeegyada.
wax soo saarka yar mugga
Cinwaanka: Golden Saddex Xagalka PCB & Technologies Ltd